तीव्रता प्रशिक्षण कार्यक्रम - विधि मकिशियाको लागि कसरी जरुरी छ
उच्च अंतराल तीव्रता प्रशिक्षणमा वार्मिंग अप महत्व
"वार्मिंग अप" शब्द देख्दा वा सुन्नुहुँदा के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ?
यदि तपाईं आज नै हुनुहुन्छ वा सोच्नु भएमा सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाई संग एक्लै हुनुहुन्न भनेर थाहा पाउनु हुन्छ।. वार्मिंग-अप प्रायः धेरै बोरिंग लाग्न थालेको छ, र वास्तवमा बेकार छ, त्यसैले मानिसहरूले यसको काम गर्दैनन्. अतीतमा यस्तै भावनाहरू भएको भए, हामीले विधि मक्का-प्रशिक्षण वार्मिंग-अपहरू, वा सेबिडिटी रूटिन बनाउनका लागि विशेष प्रयास गरेका छौं, हामीले यो कल गर्यौं, सबै आकर्षक फिटनेस उत्साह पनि जुन आकर्षक व्यक्तिले यसलाई बेवास्ता गर्दैनन्।. तर कुनै पनि अगाडी जाने अघि, न्यानो-अपसँग सम्बन्धित मौलिक प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गरौं यो के गर्ने कारण के हो?
आफैलाई कल्पना गर्नुहोला बच्चा जस्तै. अचानक, रोशनीहरू चल्छन्, र कसैले तपाईंको अगाडिको ट्याक्स रिटर्न फारमहरू त्यहाँ भर्न तल थप्छ. त्यसपछि, र एकै समयमा, तपाईं मङ्गलबार मौसम कस्तो थियो भनेर भन्न सोधिएको छ, तपाईंको हजुरबुबाका नामहरू के हुन्, र निर्णय छ छ कि एक छ फरक बीमा प्रदान गर्दछ तपाईं स्वीकार गर्न तयार छन्. के तपाईं त्यो सबै नियन्त्रणमा राख्नुहुनेछ? यदि तपाई यसलाई बलियो बनाउन अघि बढ्नुको लागि बलियो गर्नुहुन्छ भने तपाईंको शरीरमा त्यहि कुरा हुन्छ. तपाईंको शरीर अचानक अचानक छ, र यो तपाईंको दिमाग एक सन्देश पठाउँछ, तर सबै ढिलो गतिमा हुन्छ. तपाईंको शरीरमा हरेक सेल भनिन्छ "के? अब?" तपाईंको शरीरको भाग ब्रेकहरू हिँड्छ, अर्को भाग प्यान्स र बाकी मात्र लम्बाइ हुन्छ. यदि तनाव अचानक लगाईएको छैन, तर अझै पनि मांग स्तर मा, शरीरसँग तपाइँको सर्कल गति बढाउनको लागि समय छैन, र परिणाम पर्याप्त छिटो भन्दा सामान्य भन्दा थोरै छ।.
जागो स्वयं आफै
निस्सन्देह, न्यानो पार्नु भन्दा धेरै सजिलो शब्द भनेको उजुरी हो. दायाँ दयालु अनुहार तपाईंको शरीर जान्छ. मांसपेशी कक्षहरू अनुबंध गर्न तयारी गर्दै छन्, एसिड हटाउने क्रममा रक्त परिसंचरण प्रभावकारी हुन्छ, तनावमा लिनको लागि सहायक / संयोजक ऊतकहरू तयार छन्।. दीपक रोशनी माथि, तपाईंको शरीर जागृत छ, र पूर्ण कार्यको लागि तयार छ.
तैयारी अवस्था ल्याउन तंत्रिका तंत्र, जोड़हरू, र सहायक / कनेक्टिविटी ऊतकहरूका लागि असाधारणमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।. यसले सबै भन्दा राम्रो दक्षता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ. यो विश्वास गरिन्छ कि मुख्य खींच उद्देश्य उद्देश्य मांसपेशियों र sprains देखि बचने को लागि मांसपेशियों को गर्म गर्न को लागि छ. वास्तवमा, शरीरको उपचारले मांसपेशियों लाई क्षतिग्रस्त जोडहरु र सहायक / कनेक्टिविटी ऊतक को तुलना मा अधिक बेहतर बनायो. जब तंत्रिका तंत्र "सुत्ने" हो, तपाईंको मांसपेशिहरु घिमिरेहरूको प्रेमी हुन्छ, विशेषतया तीव्र आंदोलनमा प्रशिक्षण सहित. निश्चित रूपमा, तपाईंको मांसपेशीलाई तातो बनाउनु चोट लागेको छ र तपाईंको प्रशिक्षणको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंको शरीर सुन्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि मांसपेशिहरु "डराउँदैन" र "ब्रेकहरू हिट" गर्नु अघि प्रशिक्षण पनि सुरु भएको छ. मोबिल्जिङलाई पनि हल्का रूपमा हल्का गर्न आवश्यक छ र केवल जब गर्मी बढ्ने छ भने चरम स्थानहरू समावेश गर्न विस्तार गर्न सकिन्छ।. पसिना ठीक छ, तर चरममा लिइएको अत्यावश्यक सामान्य व्यायामको लागि अनावश्यक छ.
वास्तविक विधि मकिया व्यायाम सुरु हुन अघि, एक उचाइ दिनचर्या गरिन्छ, र यसले तपाईंको विधिलाई वास्तविक विधि मकिआ व्यायामको लागि तैयारीमा राख्छ।.
तो प्रीब बारेमा धेरै राम्रो छ? निस्सन्देह, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लक्ष्यको अनुपालन हो. हाम्रो Prehab मनोरञ्जन, चतुर्भुज, र कार्यात्मक आंदोलनहरूबाट बनेको छ जुन तपाईंको शरीरका सबै भागहरूलाई विशेष रूपमा शरीरको वजन प्रशिक्षणको दृष्टिकोणबाट जोगाउँछ।. यद्यपि, हामीले एकछिन हेरेका छौं. हाम्रो Prehab मा "यति स्वस्थ" गहिरो squats तपाईंको पछि र घुटनों, कलाई, कोहनी, र कंधे को लागि फायदेमंद छ कि अधिक bodyweight गति को मांग को लागि तैयारी मा आफ्नो शरीर को मजबूत. एक राम्रो कम्पैक्ट प्याकेज जुन सजिलो छ र छिटो भिडियो प्रदर्शन गरेर प्रदर्शन गर्न Source .